Xiddig hore kooxda Chelsea ah oo si weyn loola xiriirinayo inuu yahay musharaxa ugu cad cad ee kursiga tababare Frank Lampard – Gool FM
(London) 20 Jan 2021. Waxaa jira shaki ku saabsan sii jiritaanka booska shaqada tababare Frank Lampard ee kooxda Chelsea, kaddib guuldaradii xalay ka soo gaartay naadiga dhibta badan ee Leicester City.
Majalada “Metro” ee dalka England ayaa xustay in halyeeyga reer Ukraine ee Andriy Shevchenko uu yahay musharaxa ugu cad cad ee Lampard kala wareegi doona kursiga tababarenimo ee kooxda Chelsea mustaqbalka soo socda.
Chelsea ayaa laga badiyay 5 ka mid ah sideedii kulan ee ugu danbeysay, taasoo ka dhigeysa in Blues ay booska siddeed kaga jirto miiska kala sareynta horyaalka Premier League, kaliya 8 guul ay gaareen 19 kulan oo ay ciyaareen, aasoo ka dhigeysa in Frank Lampard la ceyriyo.
Majalada “Metro” ayaa werisay in Shevchenko, oo tababare u ahaa xulka dalkiisa Ukraine, tan iyo 2016 oo uusan waligiis kooxna tababare u noqonin, uu yahay musharaxa ugu cad cad si uu u helo kalsoonida milkiilaha kooxda Chelsea ee Roman Abramovich xilliyada soo aadan.
Andriy Shevchenko wuxuu Chelsea ugu soo biiray sanadkii 2006 aduun dhan 30.8 milyan oo Pound, wuxuuna ahaa heshiiskii ugu qaalisanaa ee koox England ah ay soo gabagabeyso waqtigaas.
Laakiin wuxuu ka qeyb galay kooxda 77 kulan ka hor inta uusan u ambabixin kooxda reer Ukraine ee Dynamo Kiev, wuxuuna inta uu xirnaa maaliyada naadiga Blues uu dhaliyay 22 gool.